Valentine's Day တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ | Gadget သတင်း
Valentine's Day တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
Paco L ကို Gutierrez | | အမေဇုံ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ယေဘုယျ
လာနေပြီ ချစ်သူများနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမနှစ်သက်သောနေ့ကိုမိတ်ဖက်ရှိသူနှင့်လက်ဆောင်ကိုရှာကြသူအားလုံးအတွက်ပြက္ခဒိန်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပုံမှန်အရာတစ်ခုမှာပန်းအချို့သို့မဟုတ်ချောကလက်အချို့ကိုပေးရန်ဖြစ်သည် အကယ်၍ နည်းပညာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမူရင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပေးဖို့သေချာစဉ်းစားနေသည်။ သေချာတာကသင်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်စေမယ့်ဒါမှမဟုတ်သင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေ၊ ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ သင်မှာမရှိသေးဘူး။
များစွာသောအမျိုးမျိုးရှိပါသည် အားလုံးဘတ်ဂျက်များအတွက်နှင့်အားလုံးလိုအပ်ချက်များအတွက်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလက်ဆောင်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရာများကိုတွေ့မြင်ပြီးတန်ဖိုးထားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုညစာစားပွဲသို့မဟုတ်ပန်းအချို့ပန်းပွင့်များနှင့်အတူလိုက်ပါသွားနိုင်သော်လည်းသေချာသည်မှန်လျှင်သင်ထိုနေ့ကိုမှတ်မိလိမ့်မည် နည်းပညာကငါတို့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ။ ဤတွင် Valentine's Day အတွက်ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်များကိုလက်ဆောင်အမြင့်ဆုံးမှအနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးသို့ထားလိုက်ပါသည်။
1.2 Samsung ၏ Galaxy Note ကို 10
1.3 OnePlus 7
1.5 Huawei က P30 Lite ကို
1.6 Xiaomi ကမှတ်ချက် Redmi 8
2 ၀ တ်ဆင်နိုင်သော ၀ တ်စုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားသည်။
2.1 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး 3
2.3 Huawei က FreeBuds 3
2.4 Apple က Airpods
2.5 Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ GT ကို
3 Gadgets နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ:
3.1 ခံတွင်း -B ကပါရမီ X ကို 20000N
4 စမတ် Speaker နှိုး
4.1 အမေဇုံ: Echo ပြရန် 5
4.23အားသွင်းဘူတာထဲမှာ 1
4.3 NIX Advance ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဘောင်
4.4 Sonos တစ်ခုမှာအကွာအဝေး
စမတ်ဖုန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာဆောင်းပါးဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်၎င်းကိုနေ့စဉ် ၂၄ နာရီကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်သည်မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ ဤတွင် Valentine's Day အတွက်ဈေးအမြင့်ဆုံးမှဈေးအသက်သာဆုံးအထိကျွန်ုပ်တို့တွင်အများဆုံးအကြံပြုထားသည်။
ဒီနှစ်မှာအက်ပဲလ်ကတီထွင်မှုတစ်ခုအတွက်ထင်ရှားတဲ့ terminal တစ်ခုစတင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ် စျေးနှုန်းအရည်အသွေး အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဈေးလည်းမကြီးဘူး၊ ဈေးလည်းမကြီးဘူး၊ စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာ စမတ်ဖုန်းမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အဆုံးမဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်တဲ့ထိပ်တန်းကင်မရာတစ်ခုမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာသည် iPhone ဖြစ်ပါကအများဆုံးအကြံပြုထားသည့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ ယင်း၏ 64gb, 128gb နှင့် 256gb ဗားရှင်း၌တည်၏။ လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုယူရို ၈၀၉ မှစတင်သည်။
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 10
စပ်လျဉ်းအတွက်အကောင်းဆုံး terminal ကို စျေးနှုန်းအရည်အသွေး Samsung တွင်၎င်း၏အစ်ကိုကြီးနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအများအပြားဝေမျှထားသောကြောင့်၎င်း၏မှတ်ပုံတင် ၁၀ တွင်ပါရှိကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ ပိုမိုတင်းကျပ်သောအရွယ်အစားနှင့် ပို၍ စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းတွင်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကြီးမှရရှိသောအကောင်းဆုံးနည်းပညာဖြစ်သောကြောင့်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်။
ဒီနေရာမှာကမ်းလှမ်းမှုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် အမေဇုံ ယင်း၏ 256gb ဗားရှင်း၌တည်၏။ လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
OnePlus သည်ကမ်းလှမ်းမှုကြောင့်ကျော်ကြားသည် ပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းမှာ "အကြီးဆုံး" ၏အမြင့်မှာ devices များအမှန်ဖြစ်သော်လည်း၊ OnePlus သည်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများ၌ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းပညာများထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ဤစျေးနှုန်းကွာခြားမှုသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Android ကို၎င်း၏စင်ကြယ်သောပုံစံ။ ၆.၅၅ လက်မအရွယ် Amoled 90Hz display, Snapdragon ၏အင်အားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာ နှင့်အကောင်းဆုံး gourmet ဓာတ်ပုံကိုနှစ်သက်မည့်ကင်မရာအစုတစ်ခု။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ ယင်း၏ 128gb ဗားရှင်း၌တည်၏။ လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
ကတူပုံရသည် LG ၎င်းသည်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္inတွင်အတော်အတန်အားနည်းခဲ့သည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြိုဖျက်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံး hardware ကိုအသုံးပြုသော high-end terminal G8s နှင့်ငါတို့ကိုမနှစ်ကအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သတ္တုနှင့်ဖန်ခွက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခမ်းနားထည်ဝါသည့် terminal ဖြစ်ပြီး solvent ကင်မရာများနှင့်လိုက်ပါသည်။ LG မှပြုလုပ်ထားသည့်ကြီးမားသော oled မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည် နှင့်မည်သို့မဟုတ်ရင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အားလုံးယှဉ်ပြိုင်မှုအထက်တွင်ထွက်ရပ်ဘယ်မှာအသံအပိုင်း။
Huawei က P30 Lite ကို
Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင်မြင့်မားသောအရည်အသွေးကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပေးလေ့ရှိပြီး ၄ င်းသည်ပုံမှန်စျေးနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးဖြင့်အမြဲတမ်းပေးသည်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei p30 ၏ညီငယ်အကြောင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ပရီမီယံဒီဇိုင်းနှင့်အတူမျက်နှာပြင် All-terminal ကို, ကြီးမားတဲ့ဖြင့်လိုက်ပါသွား ၆.၁၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ကင်မရာ ၄ လုံး ၎င်းသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုသင်အကောင်းဆုံးလျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုတွင်၎င်းသည်စျေးနှုန်းနှင့်ထင်ဟပ်နိုင်သည်ထက် ပို၍ ထိပ်တန်း Terminal တစ်ခုဖြစ်သည် ကောင်းသောမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် NFC။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ terminal တွင် Google service အားလုံးရှိသည်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ. လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုယူရို ၁၅၀ နီးပါးလျှော့ချပြီးယူရို ၂၀၅ ဖြစ်သည်
Xiaomi သည်အကြံပြုထားသည့်စာရင်းတွင်မပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းဖြစ်လာပြီးကတည်းက၎င်းအားမိမိကိုယ်ပိုင်တန်ဘိုးဖြင့်ရရှိခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အကောင့်ကိုများစွာထိခိုက်စေခြင်းမရှိပါကအမှတ်တံဆိပ်သည်ထူးကဲသည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကြောင့်၎င်းသည်နိဂုံးနိမ့် terminal ဟုထင်ရဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုပြproblemနာမရှိဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ လက်ရှိဂိမ်းများကစားရန်နှင့် ဘက်ထရီသည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသေချာသည် သငျသညျလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများအသုံးပြုသူလျှင်လုံလောက်ပါတယ်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ ယင်း၏ 64gb ဗားရှင်း၌တည်၏။ လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ တ်ဆင်နိုင်သော ၀ တ်စုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားသည်။
ဝတ်ဆင်နိုင်သောနည်းပညာကိုမသိသောသူများအတွက်ရည်ညွှန်းသည် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာထည့်သွင်းထားသောကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသယ်ဆောင်သောနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများ။ သူတို့မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးပြီးသူတို့ထဲမှအများစုသည်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာသည် စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဈေးအမြင့်ဆုံးမှအသက်သာဆုံးအထိရောက်ဆုံးအထိကြည့်ရှုရန်သွားမည်။
Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး 3
Apple သည်အချို့သောကဏ္sectorsများတွင်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာ Smartwatch ဖြစ်သည်။ ဤမော်ဒယ်လ်သည်လက်ရှိနှင့်အမြင့်ဆုံးရွေးချယ်စရာများမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောနည်းပညာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်စမတ်နာရီတစ်လုံးဖြစ်သည်။ အခြေခံ အကောင်းဆုံးဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပုံမှန် rounded ပန်းသီးဒီဇိုင်း။ ငါတို့ရပါလိမ့်မယ် ရေခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ထားသော GPS နှင့်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတကိုသိုလှောင်ရန် အကယ်၍ iPhone ကိုမသုံးပဲအားကစားလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၎င်းသည် iPhone နှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သည်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ ၎င်း၏ 38mm GPS ဗားရှင်းထဲမှာ။ ၎င်း၏လက်ရှိစျေးနှုန်း€ 229 ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက် ဒီမှာသူတို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နက်ရှိုင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Kygo နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်မှဤနားကြပ်များအကြောင်းကိုစိတ်ချစွာပြောနိုင်သည် နားကြပ်ကိုပယ်ဖျက်သည့်နားကြပ် စျေးကွက်ဆူညံသံ။ အကြောင်းပါ ပရီမီယံထုတ်ကုန် တေးသံနှင့်တေးသီချင်းများကိုအကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံးသူများသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်ပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည် အကောင်းဆုံးဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှု၏ ယနေ့စျေးကွက်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ တန်းတူညီမျှမှုအမျိုးမျိုးရှိခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာနိုင်ကြောင်း၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများသည်အထင်ရှားဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်၊ ထိတ်လန့်သို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ကျကြိုးမဲ့နားကြပ်ဟူသည့်အယူအဆသည်၎င်းတို့အားယိုယွင်းပျက်စီးမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်နေရာ၌မဆိုယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည် အမေဇုံ. လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei က FreeBuds 3
သူတို့ကိုစမ်းသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် ဒီမှာ ငါတို့ပြောနိုင်တယ် Huawei ဟာစားပွဲပေါ်မှာထိနေတယ် ယခုအချိန်တွင်ယူရို ၂၀၀ ထက်လျော့နည်းသောစျေးကွက်တွင်တွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး TWS နားကြပ်များထဲမှတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်သည်။ သူတို့ဟာစျေးသိပ်မကြီးပေမယ့်သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးကသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ တက်ကြွဆူညံသံဖျက်သိမ်းမှုရှိသည်ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရတဲ့နားထောင်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုအကြွင်းမဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းခံစားရလိမ့်မည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ကိုဆက်ကပ် Huawei ဂေဟစနစ်နှင့်လုံး ၀ ပေါင်းစည်းခြင်း သို့သော်၎င်းတို့သည်မည်သည့်ဘလူးတုသ်စက်နှင့်မဆိုအပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် bestial ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်း အမြဲတမ်းလုံလောက်သောစွမ်းအင်နှင့်သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့အဆောက်အ ဦ ချိန်းတွေ့။ သူတို့အခုရှိနေပြီ သင်၏ဝယ်ယူမှုအတွက်ကြိုးမဲ့အားသွင်းအပါအဝင်မြှင့်တင်ရေးအပေါ်။
ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည် အမေဇုံ. သူတို့ရဲ့လက်ရှိစျေးနှုန်းကယူရို ၁၇၉ ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာပါ ၀ င်တယ်။
Apple က Airpods
Apple မှဤကြိုးမဲ့နားကြပ်များသည်စမတ်နာရီများနှင့်မတူသည် အားလုံး Bluetooth ကိရိယာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည် မသက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် operating system ကို၏။ ၎င်းသည်နားကြပ်နှင့်အလွန်ဖော်ရွေသောဒီဇိုင်းကိုပေးထားသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုအများစုနှင့်အလားမျက်လုံးတွင်းထဲသို့ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Apple အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းကဲ့သို့သောအားသာချက်အချို့ရှိသည် သင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်အလိုအလျောက်ထပ်တူကျအောင်ပြုလုပ်မည့်သင်၏ ID နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ အသံအရည်အသွေးနှင့်အထူးသဖြင့်မသင့်လျော်သောဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်စိတ်ချရသည်။
ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည် အမေဇုံ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏ဗားရှင်းအတွက်။ လက်ရှိစျေးနှုန်းကတော့ယူရို ၁၃၉ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ GT ကို
နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သောတရုတ်ကုမ္ပဏီကြီး၏စမတ်နာရီသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အလှပဆုံးနာရီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားကစားလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က။ ၎င်းတွင်အသိပေးချက်များကိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုင်ဖုန်းကိုရောက်ရန်အကြိမ်များစွာသက်သာစေလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးမှာထိုအရာဖြစ်သည် Apple Model နဲ့မတူတာကထုတ်လုပ်သူအားလုံး၊ iPhone ကိုယ်တိုင်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတယ်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ ၎င်း၏ဖက်ရှင်ဗားရှင်း၌တည်၏။ လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုယူရို ၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Xiaomi မှစျေးအသက်သာဆုံးစမတ်နာရီကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အာရုံခံကိရိယာအားလုံးရှိသောကြောင့်၎င်းတွင်အသိပေးခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလည်းရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအဖြေမပေးနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သူခေါ်ဆိုသည်ကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပြီး၊ ခေါ်ပါ ၎င်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ၃၅ ရက်အနှောင့်အယှက်မရှိအသုံးပြုမှု၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ငါတို့အိပ်ပျော်အောင်သူနဲ့အတူအိပ်နိုင်တယ်။ ၎င်း၏ဖန်သားပြင်တွင်ထူးခြားမှုရှိပြီး၎င်းသည်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အလင်းကိုပိုမိုအလင်းကျစေလေလေ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတောက်ပသောနေရောင်ခြည်တွင် ပို၍ မြင်နိုင်စေသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မတူဘဲ။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောဗားရှင်း၌တည်၏။ လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi နားကြပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်တွင်တောင်းလျှောက်နိုင်သော်လည်းနောက်ဆုံး၌၎င်းတို့ရောင်းနေပြီး၎င်းသည်အလွန်ထောက်ခံထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုများရှိပြီးမည်သည့်စက်နှင့်မဆိုသဟဇာတဖြစ်သည်ဂူဂဲလ်လက်ထောက်ကိုတောင်မှစတင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် Airpods နှင့် Galaxy Buds များ၏အရည်အသွေးကိုမရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်နားထောင်လိုသောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုနှစ်သက်နှစ်သက်သည့်အလွန်လှပသောဒီဇိုင်းရှိခြင်းကြောင့်၎င်းတို့ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်စေသည့်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်မျှတစေသည်။ ကြိုးမဲ့ဂီတ။
ကျွန်ုပ်တို့တို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ Tocho အတော်များပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှာငါတို့ဖော်ပြပြီးသောကိရိယာများနှင့်သူတို့လိုအပ်တာကအခြားအရာတစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အရာဝတ္ထု။
ခံတွင်း -B ကပါရမီ X ကို 20000N
ဒီသွားတိုက်တံ ကျနော်တို့ကဒီမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၎င်းသည်လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံသာမက၎င်းသည်စမတ်သွားတိုက်တံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူနိုင်သောအကောင်းဆုံးသွားတိုက်တံအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS သို့မဟုတ် Android စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပါဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့အားသန့်စင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းဖြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့၏ပါးစပ်သည်သန့်ရှင်းနိုင်အောင်အထောက်အကူပြုသည် သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်အမြဲတမ်းသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ၎င်း၏ပရီမီယံဒီဇိုင်းသည်မည်သူကိုမျှစိတ်မ ၀ င်စားစေပါ အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးဤအပိုအရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်ပင်တန်ဖိုးထားသည်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ. လက်ရှိစျေးနှုန်းကိုယူရို ၁၇၃ ဖြင့်ရောင်းချသည်
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိသည့် Huawei ၏တက်ဘလက် 10 လက်မမျက်နှာပြင် ၎င်းသည် browsing အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Netflix ရဲ့စီးရီးကိုကြည့်ပါ။ ဂိမ်းကစားပါပိုအစွမ်းထက်တဲ့တက်ဘလက်တွေရှိပေမယ့် multimedia ပါဝင်တဲ့အရာအားလုံးကိုခံစားဖို့ဒါမှမဟုတ်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတွေကိုကစားဖို့ဒီဟာဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ၎င်းတွင် Huawei မှထုတ်လုပ်သည့် micro processor နှင့်ထည့်သွင်းထားသည် 2gb သိုးထီး နှင့်သင်၏ operating system ကိုဖြစ်ပါတယ် အန်းဒရွိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဂူဂဲလ်ပလေးတွင်သုံးနိုင်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ. လက်ရှိစျေးကတော့ယူရို ၃၉ ဖြစ်ပါတယ်
Amazon ၏ e-book သည် စာဖတ်ခြင်း၏ပရိသတ်များအတွက် quintessential ထုတ်ကုန်ငါတို့ကတည်းက သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံးကိုတူညီသောကိရိယာပေါ်တွင်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤကိရိယာသည်စမတ်ဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များနှင့်မတူသည် အပြာရောင်အလင်းကိုထုတ်လုပ်မထားဘူး ဒါကြောင့်ငါတို့မျက်နှာပြင်မှာဖတ်တဲ့အခါမျက်စိ strain နဲ့အိပ်စက်ခြင်းပြတ်တောက်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုရှောင်ကြဉ်တယ်။ ချိန်ညှိရှေ့အလင်းနှင့်အတူယခုဒါကြောင့်သင်လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်း၊ သင်၏ Kindle သည်စာဖတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးပုံနှိပ်ထားသောစက္ကူကဲ့သို့ဖတ်သည့်အလွန်ဆန့်ကျင်ဘက် touchscreen ရှိသည်။ မည်သည့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိဘဲပင်နေရောင်ခြည်တွင်။ တစ် ဦး တည်းတာဝန်ခံကျွန်တော်တို့ကိုတစ် ဦး ပေးနိုင်သည် ရက်သတ္တပတ်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် y အကယ်၍ သင်သည် Amazon ၏အဓိကဖောက်သည်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်စာအုပ်ရာနှင့်ချီ။ အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။. လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
စမတ် Speaker နှိုး
ပြီးသားကြောင်း Energy Sistem ကနေဒီစမတ်နှိုးစက်နာရီ ဒီမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြစို့, သူကကမ်းလှမ်းသမျှသောအဘို့အကအရမ်းကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိသည် ကြီးမားသောရှေ့ LED မျက်နှာပြင်ပါဝင်သည်တစ်ခုအထက်ပိုင်း ကြိုးမဲ့အားသွင်းဘို့ Qi နည်းပညာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဟဇာတထုတ်ကုန်။ ဒီနှိုးစက်နာရီရှိတာမို့ဒီအရာကရပ်တန့်မသွားဘူး 2.0 စပီကာနှင့်2မိုက်ခရိုဖုန်း ၏အသုံးပြုမှုအတွက် Alexa (အမေဇုံ၏အသံလက်ထောက်)။ နောက်ထပ်အများကြီးရှိနေသေးတယ် Bluetooth, ဝိုင်ဖိုင်နှင့် AirPlay ကဲ့သို့သောနည်းပညာများ သင့်ရဲ့ Apple Device များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် Apple မှ ဒီကိရိယာက iOS ရော Android အတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ. လက်ရှိစျေးနှုန်းက ၇၀၅ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေဇုံ: Echo ပြရန် 5
အမေဇုံဟာများများစားစားကြီးထွားလာတယ်။ ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Alexaရုပ်မြင်သံကြားမှစမတ်မီးသီးများသို့မဟုတ်မီးအိမ်များအထိပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်ပိုမိုသင့်လျော်သောသင်၏အသံလက်ထောက်။ ဒီလက်ထောက်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စပီကာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်ကျန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထူးခြားသည်။ ဒါက Echo Show5ပါ။ စပီကာတစ်လုံးဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းတွင် ၅.၅ မျက်နှာပြင်သေးငယ်သည် အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးတယ်။ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ပါသို့မဟုတ် YouTube သို့မဟုတ် Amazon Prime Video ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပါ။ ဒီမှာ ငါနင့်ကိုထားခဲ့ပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ငါတို့ပြီးသားလုပ်။
ဒီမှာငါတို့တွေ့နိုင်တယ် အမေဇုံ. သူ့ရဲ့လက်ရှိရောင်းဈေးကတော့ယူရို ၆၉.၉၉ ။
3 အားသွင်းဘူတာထဲမှာ 1
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်ကိရိယာများပိုမိုများပြားလာပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကောင်းတာကဘက်ထရီမပါဘဲလုပ်နိုင်တယ်၊ မကောင်းတာကသူတို့ပစ္စည်းတွေမှာအားသွင်းစရာမလိုဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့စက်တွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နည်းသွားတယ်။ ဒီ charging base နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ် တစ်ချိန်တည်းတွင်ထုတ်ကုန် ၃ ခုအထိအားသွင်းပါနှင့်အတူအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် iPhone၊ AirPod အချို့နှင့် Apple Watch တို့ဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားသွင်းနိုင်တဲ့ Qi အားလုံးကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်ရာစားပွဲတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
NIX Advance ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဘောင်
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အရေးကြီးသောအချိန်လေးကိုအဆုံးစီရင်လိုကြသည်၊ မှတ်မိရန်သို့မဟုတ်မျှဝေရန်လိုသည်၊ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်အဆောက်အအုံများနည်းပါးသောကြောင့်ဓာတ်ပုံများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်မကြာခဏလာသည်၊ သို့သော်လက်ရှိတွင်ပျော်မွေ့ရန်သို့မဟုတ်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများရှိသည်။ ငါတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့ဝေစု။ ဒီဂျစ်တယ်ဘောင်နဲ့အတူငါတို့မှာရှိမယ် အဆက်မပြတ်ဓာတ်ပုံများလှည့် ဓာတ်ပုံများပါသည့် Pendrive သို့မဟုတ် Sd ကဒ်တစ်ခုဖြင့်သာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အပြင် နာရီနှင့်ပြက္ခဒိန် function ကိုထည့်သွင်း။
Sonos သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုခြင်းကိုရပ်တန့ ်၍ မရနိုင်သောအခြားထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဆောင်ယူလာပါပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့အမှတ်တံဆိပ်၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးနှင့်စျေးအချိုဆုံးဆုံးဖြစ်သော်လည်းအဓိကအားဖြင့်ကျော်ကြားမှုများစွာရရှိသော Sonos One အကြောင်းပြောနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအားရှိသောအပြင်ယူရို ၂၀၀ အောက်အောက်ရှိအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသောအသံကိုရရှိသည်။ ငါတို့၌ရှိသကဲ့သို့ Sonos: AirPlay 2, Spotify Connect နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာသည်ကုမ္ပဏီ၏ multiroom အင်္ဂါရပ်များ၊
Sonos One ကိုဝယ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ဟာ smart speakers တွေအကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒါကြောင့်ဒီ Sonos One ဟာ Apple HomeKit, Google Home နဲ့ Amazon Alexa တွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်နေပါတယ်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကကျွန်ုပ်တို့အားအကောင်းဆုံးအာရုံကိုပေးသောစမတ်အသံထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုယခုထောက်ခံခြင်းကိုမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အဖြူရောင်ဗားရှင်းနှင့်အနက်ရောင်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ယူရို ၁၈၉ မှစတင်သည်။ ဒီခရစ်စမတ်အတွက်စပီကာဖြင့်စပီကာဖြင့်လက်ဆောင်ပြုလုပ်လိုပါက Sonos One သည် iPhone နှင့်အထူးသဖြင့် Alexa နှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Valentine's Day တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ